Warqaddii Lumumba - NETBEINS
Tani waa warqaddii ugu hadal haynta badnayd ee uu qoray Patrice Lumumba kahor intii aan la shirqoolin oo uusan galban. Patrice waxa uu ahaa siyaasi u dhashay Jahmuuriyadda dimuquraadiga ee Congo sidoo kale na ahaa raysal wasaarihii ugu horreyey ee dalkaas. Patrice Emery Lumumba waxaa shirqool lagu dilay maanta oo kale bishii June 2, sannadkii […]
By admin June 2, 2019, 5:06 PM
Tani waa warqaddii ugu hadal haynta badnayd ee uu qoray Patrice Lumumba kahor intii aan la shirqoolin oo uusan galban.
Patrice waxa uu ahaa siyaasi u dhashay Jahmuuriyadda dimuquraadiga ee Congo sidoo kale na ahaa raysal wasaarihii ugu horreyey ee dalkaas. Patrice Emery Lumumba waxaa shirqool lagu dilay maanta oo kale bishii June 2, sannadkii 1961-dii, isaga oo jira da’da 36 sano. Maanta ayay ku beegtahay 57-meeyadii kasoo wareegtay maalintii isaga oo garbo duuduub u xiran ay taliskii afgambiga talada dalka Congo kula wareegay ee uu hoggaamiyey Joseph Desire Mobutu oo ahaa agaasimihiisii madaxtooyada (Chief of staff), ay toogasho ku dileen Lumumba.
Waxaa la sheegaa in ay dalal dhowr ahi ku lug lahaayeen dilka Lumumba, waxaa na kamid ahaa dowladda Mareykanka, Qaramada Midoobay, dalka Belgium-ka. Waxaa caddeynaya in hannaanka lagu dilay siyaasigaan rugcadaaga ah ay ka dambeeyeen dalalkaasi, warqad uu qoray Lumumba oo uu ku dalbanayey in dhibaatooyinka danaysiga ku dhisan laga dulqaado Congo, ayna kheyraadkeeda u madaxbannaanaato, isaga oo farta ku fiiqayey waddamo dhowr ah oo kaalin kulaa cabburinta indheergaradka reer Congo. Waxa uu geed dheer iyo geed gaaban ba u fuulay, sidii uu uga hortagi lahaa gumeystihii xilligaas dalkiisa haystay, isaga oo xiriir la yeeshay Soviet Union-ka, Sababtaas oo la rumeysanyahay in ay tahay mida keentay in ay shirqoolaan reer galbeedku.
Lumumba waxa uu isbaddel ku sameeyay wadankiisa isaga oo xafiiska haya saddex keliya bilood. Waxa uu ololeyn jiray in ay Afrika israacdo oo ay xor noqoto. Nasiib darro se, waxaa loo toogtay habka loo yaqaan “firing Squad” oo ah in ay dhowr nin oo dabley ahi rasaas huwiyaan qof la tooganayo isaga oo geed ku taakeysan.
Lumumba intii uu xabsiga ku jiray waxa uu qoray tiro warqado ah oo uu diray siyaasiyiin iyo indheergad reer Congo ah isaga oo kaga hadlayey xaaladda waddanku ku suganyahay iyo in xorriyad la helo sida ugu macquulsan.
Halkaan waxaa ku xardhan mid kamid warqadihii uu qoray, oo uu diray xaaskiisii Pauline Lumumba sannadkii 1960-kii kahor intii aan la dilin, waxa ayna ku billaabanaysaa sida tan:
Geesiyaddii aan jeclaayey,
Waxa aan ereyadaan kuu soo qorayaa aniga oo aan ogayn in ay kusoo gaari doonaan, goorta ay kusoo gaari doonaan, in aad akhrin doonto markii ay kusoo gaaraan, iyo in aan nolaan doono kolka aad akhrinayso.
Intii aan u halgamayey xorriyaddii waddankayga Congo, ma hilmaami doono guulihii miro dhalka ahaa ee aan aniga iyo saaxiibbadey gaarnay kuwaas oo aad u qurxoonaa illaa dhammaadkii.
Laakiin se ujeedkeennii ahaa in la helo waddan sharaf iyo karaamo leh, xor ah oo aan cidna faragelin ku hayn, wili ma uusan suurtogelin, waayo waxaa gondaha na haysta guumeystaha Belgium-ka iyo xulufadiisa reer Yurub, kuwaas oo si dadban iyo si toos ah ba noo cuuryaaminaya. Waxa ay maalgeliyaan Qaramada Midoobay si ay noo kala dhantaalaan dhexdeennana uga shaqeystaan. Waan aamiinnay si xaddhaaf ah iyaguna waa ay na shirqooleen.
Waxa ay laaluusheen qaar innaga mid ah si ay danahooda u gaaraan, xorriyadeena na u hor istaagaan. Maxaan kale oo aan dhihi karaa? Waxaan uu sheegayaa, haddii aan dhinto ama noolahay ama aan xabsiga gumeystaha ku jiro ba, mecno iima leh noloshayda shaqsiga ah inta waddankeyga la haysto. Waxa muhiimka ahi waa Congo, dadkeenna faqiirka ah ee madaxbannaanidooda qabriga lagu duugay. Wax kasta oo dhaca qalbigeygu isma baddeli doono. Waxa aan aaminsanahay in shacabkeygu maalin uun ha dhawaato ama ha dheeraato e, ay ka taqalusi doonaan cadowgooda; Cadowgooda bannaanka ah iyo mid ka gudaha ah ba.
Ma nihin kaligeen. Waxaa nala jira Afrika oo dil, Asia iyo dhammaan dadyowga xoroobay ee daafaha adduunka ku nool. Shacabka Congo waa ay ka rayn doonaan calooshood u shaqeystayaasha iyo gumeystaha daba-ku dhilifka ah ee waddankeena ragaadiyey. Waan barwaaqoobi doonaa maalin aan dheerayn. Waxa aan rabaa in aad carruurtayda u sheegto in Congo mustaqbal qurxoon yeelan doono oo ay xoroobi doonto. Waxa aad u sheegtaa in waddankoodu iyaga sugayo oo ay u halgamaan. Ka dhaadhici in haddii caddaalad la waayo, aysan sharaf jiri doonin. Haddii aysan xorriyad jirin, uusan banii aadamku hanaqaadi karin.
Kama cabsanno ficillada xunxun, jirdilka iyo dhibaatooyinka gumeystaha, balse waxa aan ka qaadnaa dhiirrogelin iyo ada-dayg; intii aan dhiman lahaa inaga oo naxariis tuugayna, waxaan doorbidayaa in aan madaxa kor u qaado oo aan si xayi ah u dhinto. Afrika waxa ay diiwaangelin doontaa taariikhdeeda dahabka ah iyada oo xor ah sharaf iyo baraare na ku nool.
Ha ii barooran aniga, halyeydeydii; waan ogahay in waddankeygu, hadda dhibaateysan yahay, balse uu ka bixi doono oo xoriyad heli doono. Congo ha noolaato! Afrika ha waarto!
Patrice Lumumba, Ra’isul wasaarihii Congo.
Tixanaha Shirqooladii KGB Q-2aad